CHERRY "MOROZOVKA": SHARAXAAD KALA DUWAN, BEERTO IYO DARYEEL - CHERRY
Morozovka waa nooc macmacaanka ah ee cherry caan ka mid ah beerta. Dhaqanka waxaa lagu gartaa caabbinta barafka sare, goosashada qani ku ah iyo dhadhanka ugu fiican ee berry. Waxaan kugula talineynaa in aad barato qaddiyadaha Morozovskaya cherry, iyo sidoo kale gebogebada beerto iyo daryeelidda dalagga.
Cherry "Morozovka" - noocyo yar yar oo miro iyo noocyo berry ah, ayaa lagu soo boodey Machadka Cilmi-baarista Michurinsky ee 1997. Qoraaga ee cherry ahaa T.V. Morozova - Caleenta caan ah, khabiir awood leh oo ku saabsan beerashada miro dhagax.
"Morozovka" waxaa la abuuray iyada oo la tixgelinayo wakhtiyada casriga ah iyo qaboobaha. Breeders waxay la kulantay hawl adag oo abuuraysa noocyo ka mid ah caabbinta barafka sare leh oo lagu daro sifooyinka wanaagsan ee miraha, koritaanka hoose ee geedaha iyo iska caabida cudurada. Si aad u hesho nooc nooc oo caalami ah, noocyo of jeeriga "Lyubskaya" iyo "Vladimirskaya" ayaa loo isticmaalay saldhigga.
Xaaladda "Lyubskaya" waxay ahayd mid xiiso leh sababtoo ah wax-soosaarkooda sare, is-bacriminta, iyo sidoo kale beruudyada waaweyn iyo dhadhan fiican. Noocyo kala duwan oo ah "Vladimir" waxaa loo yaqaanaa diidmada sare ee heerkulka hooseeya. Waxaa la go'aamiyay in laga gudbo labadan nooc. Hawlaha la qabadsiinta ayaa soconayay muddo 3 sano ah. Aragtida soojeedey waxaa loo diray baaritaan. Tan iyo markaas ka duwan oo kala duwan "Morozovka" ma lumiyo caan ah.
Waxaad baranaysaa beerista noocyo kale oo berry ah: "Molodezhnaya", "Kharitonovskaya", "Turgenevskaya", "Shokoladnitsa", "Black Large".
Dheeraad ah ee maqaalka ah waxaan fiirin doonaa muuqaalada bayoolojiga ee Cherry Morozovka, sharaxaad ka duwan kala duwan, sawirada, iyo sidoo kale dib u eegista beeralayaha xirfad iyo hiwaayadaha caadiga ah. Wixii cherry dessert "Frost" sifooyinka astaamaha dibedda ee dibedda ah waa wax kale.
Geedka wuxuu leeyahay heer dhexdhexaad ah, wuxuu u eg yahay qaab kubadeed. Geedkii geed ayaa lagu daboolaa jilif khafiif ah. Taajka geedka waa mid aad u ballaaran.
Caleenta waxaa ka soo baxa laanta laanta adag. Guud ahaan, geed wuxuu leeyahay qadar yar oo caleemo ah (cawska caadiga ah). Caadi ah oo jilicsan, cows-cagaaran-cagaaran. Tiro yar oo tubercles yar ayaa laga sameeyay dusha sare ee caleemaha. Caleemaha ayaa si weyn loo yareeyey dusha sare ee caleemaha waxana ay leeyihiin qaabka loo yaqaan oveid. Fruiting waxay ku dhacdaa labadaba koritaanka bucshireedka, iyo laanta sannadlaha ah (ee dambe - ilaa xad). Leaves "Morozovka" iftiin cagaaran iftiin cagaaran. Caleemaha ayaa laga mamnuucay pubescence waxayna leeyihiin siman dusha sare ee taabashada. Xaashida caadiga ah waxay ka weyn tahay celceliska. Dhinaca warqadda, mid ayaa ka heli kartaa dhirbaaxada bichenate. Saldhigga waxaa la go'aaminayaa qanjirro yar oo casaan yar. Caleemaha waxaa lagu hayaa petioles gaaban. On petioles waxaa sidoo kale jira qanjidhada midabka cas.
Iyadoo imaanshada guga on ubax bloom inflorescences caddaan. Ubaxku waa weyn yahay cabbirka weyn waxayna ku jiraan qaabka qaboobaha. Petals waa la soo koobay.
Ma taqaanaa? Si fudud, waxaad si fudud u sumoobi kartaa jeeriga. Laakiin ma saxar ah ee berry, laakiin waxyaabaha ka mid ah abuur ah iyo abuur. Waxay ku jiraan amygdalin. Marka jidhka bini'aadamka ah, walaxkani wuxuu isu beddelaa acid a hydrocyanic acid.
Miraha "Morozovka" waa wareegsan, oo ah mid aad iyo aad u culus. Celceliska miisaanka hal berrito ayaa ku wareegsan 4.8-5.0 g. On caloosha of cherry kasta waxaa jira seam aan la yiraahdo loo yaqaan. Iyada oo saldhigga uurjiifku ku duuban yahay yar yar oo la dareemayo.
Maqaarka iyo saxarka miro ayaa leh midab casaan leh, waxaa jira tiro yar oo dhibco yar oo hooseeya. Jirka waa mid casiir leh, ma aha mid cufan. Lafaha waa wareegsan, size dhexdhexaad ah, si fudud loo kala soocayo saxarka. Miraha waxaa lagu hayaa laanta iyadoo la adeegsanayo caws dheer iyo khafiif ah. Lakabka lakabka ah ayaa loo taagaa inta u dhaxeysa cherry iyo stem.
Ma taqaanaa? Labo todobaad oo miro ah oo miro ah ayaa beddelaya saameyntooda kiniin aspirin ah.
Muuqaalka "Morozovka" ayaa iska leh qaybta caamka ah geedka isku-qudinta. Muuqaal muuqaal ah oo ka mid ah geedka ayaa ah mid aan awood u lahayn inuu bacrimiyo iyada oo is-pollin ah ubax. Sidaa darteed, si ay geedku u koraan oo u siiyaan miraha sida caadiga ah, waa caado ah in la beero noocyo is-dhiibaya oo u dhow.
Wixii Morozovka jeeriga, noocyada soo socda ee jeeriga waa pollinators ideal: Zhukovskaya, Griot, Lebedyanskaya, Michurinskaya. Raajatadaasi waa kuwo waxtarka leh oo si fiican u beddela cayayaanka.
Muuqaalka Tani "Morozovka" ma aha faa'iido, laakiin waa faa'iido. Wax-soo-saarka geedka ayaa si aan toos ahayn ugu xiran xaaladaha cimilada. Dhoofinta ubaxyada waa la fuliyaa xitaa xaaladaha guga qabow, iyo sidoo kale in maqnaanshaha bees - pollinators dabiiciga ah ee dhirta.
Sida caadiga ah, "Morozovka" ayaa dillaacey xilli hore. Xaaladda kuleylka qorraxda leh, dalagga waxaa la goostay bilowgii xagaaga. Si kastaba ha ahaatee, goosashada weyn ee miro bislaado ayaa la filayaa oo kaliya 3-4 sano kadib markii la furo.
Marka lagu daro soo jiidashada ee berry waa dhadhan aad u fiican. Cillad ah ee miraha ka mid ah noocyo kala duwan ayaa si weyn loo yareeyey, sidaas darteed macaan ee macaan ee jeeriga waxaa si guul leh hoosta ku daray by dareen yar oo qurux badan.
Kala duwan "Frost" waxay muujinaysaa dhalid heer sare ah. Iyada oo daryeel ku habboon iyo xaaladaha cimilada wanaagsan, celceliska dhalidda ee jeeriga noqon doonaa 50-65% halkii hektar ama 35 kg halkii geedka qaangaarka.
Dalagga soo baxay wuxuu leeyahay dabacsanaan hooseeya oo gariirka, taas oo ah, gaadiid fiican. Xaqiiqadani waxay ka dhigeysaa cherry Morozovskaya xiiso leh marka loo eego soo saarista alaabada waqtiyada loo maro suuqyada beeraha.
Geedka noocyo kala duwan ayaa sidoo kale muujinaya heerka badbaadada wanaagsan (heerkul sarreeya ee adagaanta jiilaalka iyo iska caabbinta abaarta). Si kastaba ha ahaatee, waxaa haboon in la ogaado in hardeysiga jiilaalka ma aha mid ku caan ah dhammaan qaybaha cherry this. Caleemaha iyo ubaxa geedku waxay qaboojin karaan oo baabi'i karaan xilliga jiilaalka adag iyo xitaa leh dhaxan yaryar. Xaaladdani waxay si weyn uga sii dartaa adkaysiga jiilaalka ee cherry Morozovskaya.
Nafaqeeyayaalku waxay yiraahdaan faa'iidooyinka badan ee cunidda khudradda cusub "Frost". Kala duwanaanta macmacaanku waa mid aad u faa'iido leh jirka jirka. Dhaleeceynta miraha ay ka kooban tahay waxaa ka mid ah walxo kiimiko ah oo badan oo dhiig-samaysan (copper, cobalt, iron), oo ka caawiya dhiig-yaraanta.
Berry waa qani ku ah asiidhyada organic, microelements bactericidal waxtar leh iyo fiitamiinooyin qiimo badan. Intaa waxaa dheer, berry cherry ku jira walxaha pectin kuwaas oo ka masuul ah in ay ka saarto xeryahooda waxyeelada leh jirka.
Ma taqaanaa? Ka hor intaanay bilaabmin daawooyinka casriga ee casriga ah, dhakhaatiirtu waxay u qoraan bukaanka qaba cudurka suuxdinta si ay u cunaan beruudyo badan, iyo xilliga jiilaalka - qaado decoction ah caleemaha qalalan la qalajiyey. Tani waxay hor istaagtay horumarinta suuxdinta suuxdinta ama fududaysay koorsadooda.
Cherry "Morozovka" - waxsoosaar cunto oo qiimo leh. Marka la wada baabbi'iyo, rabitaanka cuntada ayaa wanaajisa, harraadku waa la demiyaa, shaqada xiidmaha waa la dejiyaa.
Inta lagu jiro daweynta kulaylka, dabeecada dhadhanka ah ee Cherry Morozovka aan lumin. Laga soo bilaabo Morozov jeeriga waxay diyaariyaan waxyaabo kala duwan oo faa'iido leh, saxaradaha, saxaradaha. Midhaha geedka geedkan waxaa badanaa loo isticmaalaa si loo diyaariyo noocyo kala duwan oo macmacaan ah, cabitaanka khamriga ee guriga (caanaha, khamriga).
Xeerarka loo beerto geedo cherry
Iyadoo la raacayo dhammaan xeerarka soo degitaanka Cherry Morozovka ayaa ku farxi doona dalag badan oo ah nooca berry iyo qiimaha qiimaha leh. Si kastaba ha ahaatee, sida ay inta badan ee bannaanka u shaqeeya iyo hindisi caadiga ah, Cherry Morozovskaya waa mid aad u fudud si ay u koraan.
Kalluumaysatadu waxay ku talinayaan in la beero xilliga guga (bisha Maarso) ama dayrta (horraanta Sibteembar). Waqtigaa, dhirta ma ahan mid u nugul barafoobay iyo abaar, si ay u sii fiicnaan karto xididka. Isku day inaad hesho geed laba sano jir ah, sababtoo ah caleenta warshadahan horeba waa loo horumariyay. Si kastaba ha ahaatee, sapling hal sano jir ah ayaa sidoo kale ku habboon.
Waxaa jira nooc ka mid ah cherry oo leh qaabka baadiyaha - cherry dareemay. Waxaa si guul leh koray by bannaanka iyo dhirta miraha. Baro waxyaabaha ku sabsan ee sii kordhaya warshadan aan caadiga ahayn iyo ilaalinta ka soo cayayaanka iyo cudurrada.
Goobta dhulku waa inay noqotaa dhinaca qorraxda ee dhulka. Waa suurad wacan in ay jirto dabayl yar oo suurtogal ah, iyo biyaha dhulka hoostiisa kuma yaal meel u dhow dusha sare.
Ka hor inta aan la bilaabin shaqooyinka beerto, meesha la doortay waa in si taxaddar leh loo diyaariyaa geedaha dadka waaweyn ee mustaqbalka. Xulo 3 illaa 3 mitir oo keliya hal geed ah. Xudduudaha goobahaas oo kale, dhirta dhirtu way kori kartaa oo u kori kartaa sida caadiga ah.
Carrada dhulku waa inay ka kooban tahay dhoobo dhexdhexaad ah, bac leh ama carrada ciidda leh.
Talaabooyinka soo socda:
In xarunta of aagga for beerashada jeeriga, qodo dalool ah 50 cm qoto dheer iyo 80 cm ballaaran. Dhulka waa laga saaray godka waa in aan la tuurin: waa isku dar qasac ah oo leh humus, ka dibna ku dar ash, superfosphate iyo chloride potassium.
Ku dheji godka dheer ee 130 cm ee bartamaha godka.
Ka samee tuulo 15 cm sare oo ka hooseeya dusha sare ee dusha sare ee godka.
Saarida seedling ku dul wareeg. Qoorta xididka geedka waa inay ahaataa dhowr mitir oo ka sareeya dhulka.
Isku faafi xasaasiyad ka mid ah seedling si fiican, ka dibna buuxi godadka.
Iska ilaali ciidda wax yar, ka dibna qodo daloolka daloolka fogaanta 30cm ka geedka iyo ku shub 30 l oo biyo ah.
Marka biyaha si fiican loo nuugo, dabooli aagga foosto oo leh mulch (dhulka cusub, chips, peat).
Iska ilaali seedling si aad u jilciso. Goobta rinjiyeyaashu fogaan ah 2.5-3 m geedka.
Ka dib markii laga beerto geedka wuxuu u baahan yahay daryeel dhamaystiran. Daryeelka kookaha caadiga ah waxaa ka mid ah waraabinta joogtada ah, carrada dabacsan ee geedka, bacriminta, manjooyin xilliyeed, iyo ilaalinta cudurka iyo dulinka.
Isla markiiba beeritaanka, biyaha warshad ugu yaraan 3 baaldiyo biyo diiran otstoyannoy. Tan iyo markii "Morozovka" si fudud u dulqaadanayaan abaarta, soo saar waraabin dheeraad ah oo keliya markii loo baahdo.
Ka shaqee waraabka ka dib ubaxshaha dhirta, sidaas darteed geedka geedisocodkoodu wuxuu u qaadan doonaa midho wanaagsan, iyo berry ayaa noqon doona mid casiir leh. Biyaha hal qof weyn 4 jeer bishiiba, 1 baaldi biyo ah subaxda iyo fiidka.
Waa muhiim! Iska hubi in qoyaanku uusan joogsanaynin dusha sare ee ciidda, laakiin wuxuu galaa qoto dheer oo ah 45 cm.
Ka dib waraabin kasta, kabacdi ciidda. Hawlgalkani wuxuu ka caawiyaa sidii loo hubin lahaa helitaanka hawada xididdada geedka. Ugu horeyn, ka nadiifi wareegga waraabinta ee haramaha ka qaadaya nafaqooyinka dhulka. Ka dibna qodo aagga wareegga wareegga wareegga 10-15 cm oo qoto dheer. Dhexdhexaadiyuhu waa inuu la socdaa saadaalinta taajka. Halkaan waxaa ku yaal meel u dhow biyaha oo biyaha la keeno.
Tayada goosashada mustaqbalka waxay ku xiran tahay raacitaanka farsamada saxda ah ee quudinta geedo cherry.
Daadi dhulka oo qoyaan leh lakabka mulch oo ka kooban balka iyo humus. Heerka la rabo ee lakabkaan waa 2 cm.
7-sanadood ee ugu horreeya ayaa bacrimiya geedka sanad walba. Mustaqbalka, fiiro gaar ah inta udhaxeysa dharka. Nafaqada macdanta ah si ay u sameeyaan 2 sano ka dib beerashada, iyo Bacriminta organic - 4 sano kasta.
Qaboojiyaha wuxuu guud ahaan u adkeeyaa cudurrada fangas. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira tiro cuduro ahkaas oo ka mid ah geedka loo ilaaliyo:
Cocomycosis (Wakiilka keena cudurku waa soodhuumka sossomuse). Marka uu infekshan daran, caleen ayaa lagu daboolaa qaabab casaan ah. Dhawaan caleenta caleenta oo si degdeg ah u dhacda. Geedka ayaa daciifiya, lumiya awoodda cunnida si caadi ah wax u cuno, uguna dhinto horeyba. Wixii daaweyn ah ee johnkoo qotomiska, samee daaweyn qoryo saddexle ah leh fungicides. U samee daaweynta ugu horeysa ka hor inta aanad gooysin; labaad - at dhamaadka ah wajiga ubax; markii saddexaad, ku buufin dhirta 2-3 toddobaad ka dib markii gaysashada.
Anthracnose. On maqaarka ee miro yar yar u muuqdaan formation yar oo cawl-brown formation. Dhibco si dhakhso ah ayey u koraan, garaacaan geedka oo dhan. Dhowrka jidhka ayaa soo noqda. Cunista miraha ay waxyeeleeyeen waa wax aan macquul ahayn. Taas bedelkeeda, dhibco yar oo madow ayaa lagu arkay caleenta. Caleemaha ma qalajin, laakiin si tartiib tartiib ah u dhaco. Ka-hortagga anthracnose waxay ku buufinaysaa xal of 0.2% a zinc ama manganese sulfate. Haddii geedka hore ay jiran tahay, isla markiiba ha saaro midhaha ay saameeyeen. Ka dibna qoryaha ku daawee fungicide ("Poliram", "Topsin-M", "Topaz", "Horus"). Moobeyl la sameeyay ka hor ama ka dib ubax. Nidaamka waa in lagu celiyaa 12-14 maalmood kadib.
Xoqan Dhexdhexaadin. Meelaha Brown leh cidhifyada madow waxaa lagu taagay caleemaha. Si looga hortago, si joogto ah u soo ururiyaan oo u dhintaan caleemaha dhintay, ka dibna si taxadar leh u qodo ciidda. Ka hor ama ka dib waqtiga ubax, ku dawee geed leh fangaska "Hom", ku celi 15-20 maalmood ka dib.
Monilioz. Cudurka calaamaddu waa mid si dagdag ah u caleemo yaryar. Caleenta ayaa la gubay. Miraha waxaa lagu daboolaa koritaan caan ah. Kala saarista guga ka hortagga qoryaha iyo dhulka hoostiisa 3% Bordeaux dareeraha ayaa ka hortagaya wasakheynta. Marka lagu jiro la dagaallanka moniliosis ka hor inta aanuu ubaxin kelyaha, daaweynta xal sulfate ah (3%) ayaa lagu dhaqmaa. Ka hor inta aan la buufin buufinta ubax "Horus", "Fundazol", "Azofos", "Zircon". Marka lagu daro cudurada, geedaha cherry ayaa mararka qaarkood la weeraro. cayayaanka. Tixgeli kuwa ugu caansan:
Aphid. Tani cadowga yar ee geedkii cherry wuu ka yaabiyay caleemaha yar yar iyo caleemaha. Haddii aad bilawdo guga, waxaad suura gelisaa suumanka xayawaanka, ka dibna muuqaalka muuqaalka aphids waa la iska ilaalin karaa. Dhacdadani ma ogolaanayso in qallafsan si ay u jiidaan dirxiga dhibcaha ah oo la geeyo cherry. Waxa kale oo aad ku cabsiin kartaa quraanyo leh faleebo biyo ah oo toon ah.
Duulid - Cayayaanka labaad iyo kuwa ugu khatarta badan ee cherry. Dadka qaangaarka ah waxay ka badan yihiin dhirta, lagu aasay dhulka. Dirxiga ilma-duurka waxay sababi karaan waxyeelada ugu weyn - waxay ku dhex mari doonaan ugxan-yaraanta iyo wejiga dhirta uurjiifka ah ee guntiga cad ee ilaa 1 cm oo dheer, waxaa jira dhowr siyaabood oo wax ku ool ah oo loola dagaallamo duulimaadka cherry. U hubso in aad ka saarto dhammaan miraha geedka ka soo geedka hoostiisa oo qodo jirridda geedka. Geedka ciidda qoday wuxuu qaboojin doonaa, iyo duqsiyada jiilaalka ayaa si caadi ah u dhinta.
Waa muhiim! Isku day inaad la dagaallanto cudurrada iyo cayayaanka geedaha cherry ee siyaabo ammaan ah oo ammaan ah, iyada oo aan loo isticmaalin kiimikada.
Cherry "Frost" sidoo kale waxay u baahan tahay manjooyin joogto ah iyo samaynta taajkii. Nidaamka xoqista ayaa lagu talinayaa horraanta gu'ga iyo dayrta. Wixii manjooyin ah, waxaad u baahan doontaa sawir, salaan, mindi, iyo beerta. Goobta beerta - daaweyn caalami ah oo si taxadar leh u ilaalisa geed ka soo cayayaanka iyo cudurrada. Si aad u diyaariso dagaalka beerta waxaad u baahan doontaa:
dufanka xayawaanka (1 qayb);
ash alwaax (1 qayb);
turpentine (5 qaybood);
khamriga (2 qaybood);
rosin (10 qaybood).
Ku kaydi stock in daasadaha xiran.
Waa muhiim! Haddii aad dayacdo manjooyin, tirada caleemaha qaawan ayaa si weyn u kordhi doona, taas oo si dhab ah u saameyn doonta dhalidda geedka cherry.
Iska yaree dhammaan laanta lakabka ah ee taajka.
Ka tag 5 caleemaha ugu xooggan geed. Laamaha noocan oo kale ah waa in ay ku yaalaan safaro dhowr ah (3 caleemo on safka hore, 2 laamood oo ku yaal labaad iyo 1 ee saddexaad).
Ka dib markii la sameeyo dhirbaaxo, manjooyin xiga wuxuu ka kooban yahay ciribtirka caleemaha oo aad u dhagan.
Inkasta oo "Qaboojiye" loo dhigo noocyo kala duwan oo u dhaxeysa barafka, waa lagama maarmaan in la daryeelo diyaarinta geedka xilliga qaboobaha:
ururiyaan dhammaan caleemaha dhacay agagaarka jirridda;
perekopyvayte iyo mulch dhulka leh peat, caws ama dhadday ka dib kasta waraabiyo;
nadiifi dusha sare ee cawska iyo caleemaha qalfoofka ee jilif dhintay, ka dibna cadaan;
aagagga waqooyiga ee shtamb, waa in la duubo warqad ama ceyrin.
Nidaamyadani waxay gacan ka geysanayaan in geedku ka ilaaliyo saameynta cimilada.
Laga soo bilaabo jiirka, waxyeello jilicsan iyo caleemaha hoose ee geedka, waxay badbaadineysaa weelka barta shabaqa leh shabaqa khaas ah ama alaab kale oo cufan ah.
Sida aan aragno, Cherry Morozovka waa noocyo kala duwan oo macmacaan leh tayada tiknoolajiyadeed ee aadka u fiican ee miraha. Si aad u geed geedkaaga ah u koraan caafimaad iyo inaad ku raaxaysato dalagyo hodan ah, ha ilaawin inaad raacdo dhammaan talooyinka kor ku xusan.